Nagu saabsan - Nanjing Huade Qalabka keydinta Qalabka Warshadaha Co., Ltd.
Nanjing Huade Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1993. Waxaan nahay mid ka mid ah hormuudka iyo bixiyayaashii ugu horeeyey ee diirada saaraya naqshadeynta, been abuurka, rakibida nidaamyada keydinta otomaatiga ah iyo nidaamka qashinka lagu keydiyo.
Sannadkii 2009, HUADE waxay ka dhistay warshaddeeda cusub in ka badan 66,000 oo mitir murabac ah Nanjing Jiangning Science Park. Waxaa jira 5 dhir xirfadle ah iyo in kabadan 200 oo qalab iyo qalab ah.
Sannadkii 2012, HUADE ayaa qaabaysay oo soo saartay nidaamkii ugu horreeyay ee si buuxda u otomaatigga ah ee loo yaqaan 'Master shuttle system' (oo sidoo kale loo yaqaan 'carrier system and shuttle system').
Warshad cusub oo tijaabo ah oo dhererkeedu yahay 40 mitir oo loogu talagalay nidaamyada keydinta ee otomaatigga ah ayaa la dhisayaa sannadka 2020.
Si loola wadaago macaamiisheenna caqli badan, qiimo jaban, wax badan oo la hagaajiyo oo xalka kaydinta aaminka ah, iyo in loo abuuro qiimo dheeraad ah bakhaarrada macaamiisheena.
Si loo siiyo tayada ugu fiican ee nidaamyada keydinta otomaatiga ah iyo nidaamyada qashin-qubka caadiga ah ee lala-hawlgalayaashayada iyo qeybiyeyaasha.
Astaamaha Wax soosaarka ee HUADE
Dhammaystir: waxaan awoodnaa inaan soo saarno noocyo dhammaystiran oo nidaamyada wax lagu kaydiyo, nidaamyada keydinta otomaatiga ah.
Cusbooneysiinta iyo abuuristu waa isha ay ka korayso HUADE. Waxaan had iyo jeer bixinaa naqshadaha ugu horumarsan, naqshadaha ugu dambeeyay.
Waa aasaaska HUADE. Nidaamyadeena ayaa ah kuwa aad u badbaado badan uguna wanaagsan xulashada la-hawlgalayaashayada, qeybiyeyaasha iyo macaamiisha sababtoo ah bir tayo sare leh, xisaabinta la safeeyey iyo naqshad jilicsan.